Tsy azo atao kitoatoa ny asan'Andriamanitra
Levitikosy 8:18-36 "18 Ary nentiny nanatona ny ondrilahy izay hatao fanatitra odorana; ary Arona sy ny zanany nametraka ny tànany tamin’ny lohan’ny ondrilahy. 19 Dia novonoina iny; ary Mosesy nanopy ny ra manodidina tamin’ny lafin’ny alitara. 20 Ary norasainy tsara ny ondrilahy; dia nodoran’i Mosesy ho fofona ny lohany sy ireo voarasa ireo ary ny saborany. 21 Ary ny taovany sy ny tongony nosasany tamin’ny rano; dia nodoran’i Mosesy ho fofona teo ambonin’ny alitara ny tenan’ny ondrilahy; fanatitra odorana izany ho hanitra ankasitrahana, dia fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah, araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy. 22 Dia nentiny nanatona koa ny ondrilahy anankiray, dia ny ondrilahy fanokanana; ary Arona sy ny zanany dia nametraka ny tànany tamin’ny lohan’ny ondrilahy. 23 Dia novonoiny iny; ary nangalan’i Mosesy ny ra ka natentiny teo amin’ny tendron’ny ravin-tsofin’i Arona ankavanana sy tamin’ny ankihiben-tànany ankavanana ary tamin’ny ankihiben-tongony ankavanana. 24 Ary nentiny nanatona koa ny zanak’i Arona, ka notentenan’i Mosesy ny ra ny tendron’ny ravin-tsofiny ankavanana sy ny ankihiben-tànany ankavanana ary ny ankihiben-tongony ankavanana; ary ny ra sisa dia natopin’i Mosesy manodidina tamin’ny lafin’ny alitara. 25 Ary nalainy ny hofany sy ny saborany, dia ny safodrorohany sy ny ila-atiny lehibe sy ny voany roa mbamin’ny fonom-boany ary ny sorony ankavanana. 26 Ary ilay harona nisy ny mofo tsy misy masirasira, izay teo anatrehan’i Jehovah, dia nangalany iray tamin’ny mofo tsy misy masirasira sy iray tamin’ny mofo voaisy diloilo ary iray tamin’ny mofo manify ka napetrany teo ambonin’ny saborany sy ny sorok’ondry ankavanana. 27 Dia napetrany teo amin’ny tànan’i Arona sy ny zanany ireo rehetra ireo ka nahevahevany ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan’i Jehovah. 28 Dia nalain’i Mosesy tamin’ny tànany indray ireo ka nodorany ho fofona teo ambonin’ny alitara niaraka tamin’ny fanatitra odorana; fanati-panokanana ireo ho hanitra ankasitrahana, dia fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah. 29 Dia nalain’i Mosesy koa ny tratran’ondry ka nahevahevany ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan’i Jehovah; anjaran’i Mosesy avy amin’ny ondrilahy fanokanana izany, araka izay efa nandidian’i Jehovah azy. 30 Ary nangalan’i Mosesy ny diloilo fanosorana sy ny ra izay teo ambonin’ny alitara ka nafafiny tamin’i Arona sy tamin’ny fitafiany ary tamin’ny zanany sy tamin’ny fitafian’ny zanany koa; dia nanamasina an’i Arona sy ny fitafiany ary ny zanany sy ny fitafian’ny zanany koa izy. 31 Ary hoy Mosesy tamin’i Arona sy ny zanany: Andrahoy eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana ny hena; ary eo no hihinananareo azy mbamin’ny mofo izay eo amin’ny haron’ny fanati-panokanana, araka izay nandidiako hoe: Arona sy ny zanany no hihinana azy. 32 Ary izay sisa amin’ny hena sy ny mofo dia hodoranareo amin’ny afo. 33 Ary tsy hiala eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana hafitoana hianareo, dia mandra-pahatapitry ny andro fanokanana anareo; fa hafitoana no hanokanany anareo. 34 Tahaka ny efa natao andro-any no nandidian’i Jehovah hatao, hanaovana fanavotana ho anareo. 35 Ary hitoetra eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana hafitoana andro aman’alina hianareo ka hitandrina izay asain’i Jehovah hotandremana, dia tsy ho faty hianareo fa izany no nandidiana ahy. 36 Dia nataon’i Arona sy ny zanany izay rehetra efa nandidian’i Jehovah ka nampilazainy an’i Mosesy."
Ny firindran’ny fanatitra. Ny fanatitra noho ny ota no voalohany indrindra (14) satria ny voavela heloka ihany no afaka manompo an’Andriamanitra. Manaraka azy eto ny fanatitra dorana (18, 20, 21) izay mariky ny fanoloran-tena an-tsitrapo. Farany kosa ny fanati- panokanana (22, 28b,29b) izay fametrahana amin’ny toerany ny mpisorona. Mialohany hamonoana ilay biby hatao fanatitra, dia mametra-tanana aminy hatrany ilay hotokanana (14b, 18, 22) ho marika fa io biby io no misolo toerana azy. Ny tenan’ny mpisorona iray manontolo no tokanana. Asiana piti-drà avokoa i Arona sy ny zanany, ny sofin’izy ireo, ny ankiben-tongony sy tanany (23, 24) ary ny fitafiany (30) satria ny tenany manontolo dia tokony ho masina avokoa. Ny zavatra henoin’ny sofiny, ny asa ataon’ny tanany, ny toerana alehan’ny tongony dia tokony ahitana taratra fa olom-boatokana izy ireo. Torak’izany koa ny mpino novidian’ny ràn’i Jesosy: tsy tokony hiteraka fahatafintohinana velively ny vatany iray manontolo (Marka 9:43-47). Maharitra ny fanokanana. Fito andro be izao ny fanatontosana azy ka tsy mahazo mandao ny toerana ireo mpisorona mba tsy ho faty (33, 35). Ilay fihinanana hena sy mofo eo anatrehan’i Jehovah (31) dia sady sakafo ho an’ny vatana no mariky ny fiombonana amin’Andriamanitra (jereo koa ireo mpitarikan’Isiraely nisakafo: Eksodosy 24:9-11 sy ny Tompo niara-nisakafo tamin’ny mpianany: Jaona 21:12-13).
Ry mpino, kendreo mba ho masinaavokoa na ny fomba fiakanjo, na izay jeren’ny maso sy henoin’ny sofina (indrindra amin’izao fandrosoan’ny teknolojia ara-pifandraisana izao).